अमेरिकामा पैसाको बोट हुदैन डीभी परेन भनेर चिन्तित हुनु पर्दैन । – fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट
पोखरा ३० असोज मंगलबारदेखि आवेदन खुलेको छ डीभी भरनेको भरखरका युवायुवतीको त कुरै छोडौं डाक्टर, पाइलट, शिक्षकदेखि सरकारी उच्च ओहदाको कर्मचारी सबैलाई डीभीले आकर्षित गर्छ हामीले जानेको कुरा हो। नेपालमा स्वदेशमा आफू र आफ्नो भूमिकालाई चट्क्कै विर्सेर डिभीको पछि लाग्नेहरुको हिसाब गर्ने हो भने ठूलै जमात बन्छ ।डीभी होल्डर को अनुभव पनि रहेको छ ।
२ वर्षअघि यस्तै लहैलहैमा लागेर डिभी चिट्ठा भरेर अमेरिका आउनु भएको । यो छोटो अवधीमा लामा अनुभवको संगालो बटुलेर । यही अनुवभका केही पत्राहरू बाढ्ने हुटहुटी जागेको डीभी होल्डर को भनाई रहेको छ।
यहाँ हरेक दिनको सुरुवात पैसाबाट हुनेछ । र, पैसाबाटै अन्त्य । नेपालमा एक जनाले कमाएर परिवारै पालिने वातावरणबाट आउनु भएकोहरुलाई यहाँ प्रत्येकले काम गर्दा पनि जीवन चल्न मुस्किल भएको देख्दा डिप्रेशन पनि हुनसक्छ ।
भरखरका युवायुवतीको त कुरै छोडौं डाक्टर, पाइलट, शिक्षकदेखि सरकारी उच्च ओहदाको कर्मचारी सबैलाई डीभीले आकर्षित गर्छ हामीले जानेको कुरा हो। नेपालमा स्वदेशमा आफू र आफ्नो भूमिकालाई चट्क्कै विर्सेर डिभीको पछि लाग्नेहरुको हिसाब गर्ने हो भने ठूलै जमात बन्छ ।डीभी होल्डर को अनुभव पनि रहेको छ ।
डिभी भरेर अमेरिका आउने व्यग्र चाहना हो भने ग्यास स्टेशनदेखि स-साना होटल, किराना स्टोरदेखि उद्योगको फ्याक्ट्रीसम्म, पिज्जा बोकेर घरघरमा पुर्‍याउनेदेखि दिनको १२ देखि १८ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म उभिएरै (अमेरिकाको ९० प्रतिशत काम उभिएरै गर्नुपर्ने हुन्छ) गर्नका लागि तयार हुनुपर्नेछ।
डलरमा भएको कमाई नेपालीमा रुपान्तरण गर्दा लाखौं भएपनि त्यो पैसाले अमेरिकामा दैनिक खर्च धान्नै मुश्किल हुन्छ । किनभने बिनाकाम त जिवन चल्दै चल्दैन । र, यति काम गरेबापत प्रत्येक घण्टाको हिसाबले पाउने केही डलर मात्रै हो । त्यसैबाट यहाँ जिवन चलाउने हो ।
मेरो कुरा पढेर कतै कसैलाई हावादारी पनि लाग्न सक्छ । नेपालमा हुँदा खाँदाको राम्रै पेसा छोडेर हिँडेको मैले आजसम्म पनि अमेरिकामा कुनै लय समात्न सकेको छैन । अमेरिकामा हुने अधिकांश नेपालीको हविगत मेरोजस्तै हो । नेपालमा जे-जस्तो भएपनि अमेरिका आएर सुरु गर्ने जिवन भनेको शून्यबाटै हो । र, शून्यबाट १/२ बनाउनै २/४ वर्ष बित्नसक्छ ।
चिल्लो गाडीमा चढेर २/३ हप्तामा पाएको १/२ दिनको छुट्टीमा आराम गर्न समुद्रको किनारामा गएर फेसबुक/ट्वीटरमा फुस्स हाँसेको बनावटी खुसी देखाएको फोटो देखेको भरमा अमेरिकाको सुखको कल्पना गर्छौं ।
यहाँ आएपछि नेपालको अनुभवको आधारमा बिरलै काम पाएपनि अमेरिकाको वातावरणमा आफूलाई भिजाउन २/४ वर्ष कटाउनै पर्छ । बस्ने घर अपार्टमेन्ट, सवारी साधनदेखि सम्पूर्ण खर्च गर्दा बचत हुन धौधौ हुन्छ ।
यदि काम बाहेकको पक्ष हेर्ने हो भने अमेरिका भएको सबैभन्दा ठूलो पक्ष कमाई नै हो । अर्थात् गर्ने काम सबैभन्दा ठूलो पक्ष हो । यदि कमाउन सकीयो भने विश्वको शक्तिशाली देशको सुविधा पाहियो नत्र नेपालको भन्दा हालत खराब हुनसक्छ । साँच्चिकै भन्दा अमेरिकामा गर्ने मेहनत नेपालमा गर्ने हो भने नेपालमा अमेरिकाको भन्दा कम आनन्द प्राप्त गर्नुहुने छैन ।
बिहानदेखि बेलुकासम्म घण्टाको हिसाबले गर्ने काम, परिवारका सबै सदस्यको फरक-फरक कार्यतालिकाले समाज होइन पारिवारिक वातावरण नै बिग्रन सक्छ अमेरिकामा । हामीले नेपालका उपसचिवदेखि सचिवसम्म, डाक्टरदेखि पाईलटसम्म, सामान्यदेखि गन्यमान्यसम्म ग्रिनकार्ड पाएर अमेरिका भासिएको समाचार धेरै नै सुनेका छौं । तर ती गन्यमान्यले अमेरिकामा गएर के कमाए ? के गुमाए? भन्नेतिरको लेखाजोखा कमै गर्छौं होला।
अर्थात् सबैमा अमेरिकाको ग्रिनकार्डको भूत चढेको देखेका छौं । मानौं ग्रिनकार्ड पाएर अमेरिका गएपछि डलर रुखैमा फलेको हुन्छ c र, हामीले त्यो सबै टिपेर बोरामा जम्मा गर्ने हो ।
तर यहाँ ग्यास स्टोरमा, रेष्टुरेन्टमा, साना साना पसलमा, पिज्जा बोक्दै घरघरमा पुर्‍याउनेहरुसम्म घण्टाको हिसाबले गर्ने काम देख्दा हामीलाई नै लाग्छ विचरा हामी।नेपालमा साना तिना कामै नदेख्नेहरुलाई यहाँ आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।कामको महत्व के हो? भनेर यसहो छ अमेरीका पुगेका को भनाई नेपालमा साना तिना कामै नदेख्नेहरुलाई यहाँ आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ कामको महत्व के हो भनेर ।